Yakareba Reach 55ft Telescopic Carbon Fibre Pole Ine Yakakwira Pressure Kuchenesa Masystem
Iyo yekumanikidza yekumanikidza yekutsvaira muchina unoita iyo yakanyanya kumanikidza mvura inogadzirwa neiyo yakanyanya yekumanikidza plunger pombi yekugeza pamusoro pechinhu kuburikidza nemagetsi mudziyo. Inogona kubvisa tsvina, kusuka, kuzadzisa chinangwa chekuchenesa pamusoro pechinhu. Nekuti iko kushandiswa kwepamusoro-pekumanikidza mvura ikholamu kuchenesa tsvina, yakanyanya-kumanikidza kuchenesa iriwo imwe yenyika inozivikanwa senzvimbo dzesainzi, dzehupfumi uye dzakasununguka nzira dzekuchenesa.
Yakakwira kumanikidza isinganetsi Telescoping kabhoni fiber matanda ekuchenesa Bindu
12m Heavy Duty Fiberglass Telescopic Pole yekumanikidza kumanikidza kuchenesa
3k / 6k / 12k kabhoni fiber telescoping matanda ekumanikidza ekumanikidza nekuchenesa
Mhando dzakasiyana dzesarudzo dzepasirese, nepo uchisimbisa mhando yechigadzirwa, wedzera aesthetics yematanda.
Aya matanda anotsvedza zviri nyore uye anogona kukiyiwa chero akareba, ayo akakodzera kune chero chishandiso panochengeterwa compact uye kureba kwekuwedzera urefu.